Ny LMMA dia samy hafa amin'ny fomba mahazatra MPA Amin'ireo faritra tantanina eo an-toerana dia miavaka amin'ny fananana eo an-toerana, ny fampiasana sy / na ny fifehezana, ary amin'ny faritra sasany dia manaraka ny fomba nentim-paharazana sy ny fomba fitantanana eo amin'ny faritra. Mifanohitra amin'izany kosa, ny teny hoe MPA mazàna dia manondro faritra iray voatondro ara-dalàna amin'ny alàlan'ny fomba fanjakan'ny fanjakana ambony, miaraka amin'ny fitantanana ampiharina na arahi-maso ny masoivoho foibe.
The misokatra amin'ny varavarankely vaovaoAmbanin'ny tambajotra an-drenivohitra dia vondron'ny mpitsabo mpandray anjara amin'ny tetikasa fiarovana ny tontolo iainana manerantany, manerana an'i Indo-Pasifika, izay miara-miasa mba hanatsarana ny ezaka fitantanana. Ny LMMA Network dia namolavola misokatra amin'ny varavarankely vaovaohitarikamanokatra fisie PDF izay manome torolalana amin'ny fananganana vondrom-piarahamonina ao an-toerana ary fametrahana LMMA.
The misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy faritra manodidina ny faritra avaratr'i Pasifika sy Protected (PIMPAC) dia fiaraha-miasa amin'ireo manampahefana eo anivon'ny vohikala, fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana, vondrom-piarahamonina ao an-toerana, federaly, fanjakana ary territorial agence, ary ireo mpiray antoka hafa miara-miasa mba hampitombo ny fampiasana sy ny fitantanana ireo faritra voaaro sy voaaro ao amin'ny nosin'i Pacific Islands sy Freely . Ny tanjon'ny PIMPAC dia ny manolotra fahafahana tsy tapaka ny fizarana vaovao, fahaizana, fampiharana ary traikefa amin'ny fampivelarana sy fanamafisana ny fahaiza-mitantana eo amin'ny sehatra any amin'ny faritra afovoan'ny Pacific. Ny PIMPAC dia manome fanohanana ny ezaky ny fitantanana ny faritra eo amin'ny faritra, anisan'izany ny tany sy ny faritra voaaro ary voaaro, izay manohana ny fomba fitantanana manerantany amin'ny 'lalina mankany amin'ny vatohara'.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFandaharam-pianarana: Fitantanana ny fiaraha-monina any Papouasie-Nouvelle-Guinéemanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFandaharam-pianarana: Fitantanana ny fiaraha-monina any Tobagomanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFandaharam-pianarana: Ny faritra voaangona ao an-toerana ao Yapmanokatra fisie PDF